"Isitali", intuthuzelo kunye nokunyaniseka!
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguClaire
Embindini welali, nazo zonke izinto zayo eziluncedo (iivenkile kunye nemarike). Indawo yokuhlala yahlaziywa ngokupheleleyo ngexesha lehlobo lika-2019. Iyakwazi ukuhlalisa abantu be-2. Ihlathi laseCrécy elikufutshane kunye nebhayi labo bonke abakufutshane kakhulu.
Indlu yethu, eyakhiwe ngo-1777, ibe sisiqhamo sokusetyenziswa okuninzi, esiya kukuvuyela ukwabelana nawe ngayo. Indawo yokuhlala sisitali esidala, esilungiselelwe intuthuzelo yakho kunye nokugcina ubunyani bayo.
Igumbi lokulala lineebhedi ezi-2 ze-90X 190. Iiduvethi, imiqamelo, izikhuseli zoomatrasi kunye nezikhuseli zepillowcase zibandakanyiwe. Ucwangcisa amashiti akho, iipillowcases kunye neetawuli.
Amaphepha kunye neetawuli zinokuqeshwa nge-euro ezi-5 ngomntu ngamnye.
Indawo yokulala ixhotyiswe ngekhitshi (ifriji, iihotplates, isinki), imicrowave, "Senséo" umenzi wekofu kunye "nesihluzi" somenzi wekofu. Kufakwe ne heater. Indawo yokuhlala ishushu ngaphambi kokufika kwakho.
Crécy en Ponthieu yidolophu nentle, nto leyo inika iintlobo ngeentlobo iivenkile: ivenkile, mini-emarikeni, unosilarha, kwiivenkile, ngeentyatyambo, ndlu cofa, kundikhumbuza / iivenkile isipho, loonobuhle, iinwele, gym, ofisi lokhenketho kunye imyuziyam ezingcwele kwi idabi le-1346. Imarike imiselwe kusasa ngoMvulo. Iziko lezempilo kunye nekhemesti nazo zifumaneka kuwe. Ikwabonelela ngoluhlu olwahlukeneyo lwembali, ilifa lemveli kunye nomtsalane wendalo wabakhenkethi.
Sihlala kwindlu ekufutshane. Siyafumaneka ukukunika olona lwazi lungcono. Ukuba asikho, sinokusoloko siqhagamshelwa ngomnxeba.
Unayo into efunekayo yokwenza ikhaya elihlala kwiindleko zakho.